तनावबाट मुक्ति पाउन सुत्नुअघि यसो गरौँ – Etajakhabar
बुधबार, चैत्र ०७, २०७४ | Wednesday, Mar 21, 2018
तनावबाट मुक्ति पाउन सुत्नुअघि यसो गरौँ
आदर्श प्रधान मनोपरामर्शदाता, होलिस्टिक माइन्ड्स, धापासी
तनावले शारीरिक, मानसिक तथा भावानात्मक रूपमा मानिसलाई असर पुर्‍याउँछ । तर, सही तरिकाबाट गरेको उपचार र परामर्शबाट डिप्रेसन पूर्ण रूपमा निको हुन सक्छ । यस्तो समस्या सबै उमेरका व्यक्तिहरूलाई हुन सक्छ । त्यसमध्ये पनि धेरै जसो युवा र महिलाहरू पीडित छन् । त्यसो त बालबालिका तथा प्रौढ उमेरका मानिस पनि डिप्रेसनबाट पीडित छन् । सामान्य देखिने डिप्रेसनले कहिलेकाहीँ मानिसलाई जटिल अवस्थामा पुर्‍याइदिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् १९९० मा गरेको सर्वेक्षणअनुसार डिप्रेसन चौथो प्रमुख रोग भएको तथ्यको खुलासा गरेको थियो । अझ, सन् २०२० सम्म डिप्रेसन दोस्रो प्रमुख रोग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डिप्रेसनका लक्षण उदासीन तथा निरास हुनु । कुनै कुरा तथा कामप्रति इच्छा नहुनु । अत्यधिक निद्रा लाग्नु वा कम लाग्नु । एकाग्रताको कमी हुनु । जीवन बोझ लाग्नु । पश्चाताप्बोध हुनु । थकान वा ऊर्जाको कमी हुनु । भोक कम लाग्नु वा अति खानु । चिडचिडापन हुनु । आत्मविश्वासको कमी हुनु । यौन इच्छामा कमी आउनु । यी लक्षणमध्ये तीन–चार लक्षणहरू दुई हप्ता वा सोभन्दा बढी लगातार रहेमा डिप्रेसनको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । शंका लाग्यो भने तुरुन्त मनोचिकित्सक वा मनोविज्ञसँग परामर्श गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ
डिप्रेसनका कारण मस्तिष्क रसायनको असन्तुलन अनुवांशिक कारण मनोगत तथा सामाजिक कारणहरू जीवनमा घटेको असम्भावित घटना डिप्रेसन सुरुको अवस्थामा नै थाहा भएमा सजिलै बाहिर निस्कन सकिन्छ । यदि कठिनाइ भयो भने मनोचिकित्ससँग परामर्श लिनुपर्ने पनि हुन्छ । यसका साथै मनोविज्ञहरूसँग नियमित परामर्श गर्दै उपचार गर्न सकिन्छ । जसमध्ये सिबिटी (कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी)लाई उत्तम मानिन्छ ।
डिप्रेसनबाट मुक्त हुन
डिप्रेसनका पीडितहरू शरीरिक रूपमा निष्क्रिय हुने हुँदा एरोबिक्स, जुम्बा, नृत्य, योगासनजस्ता शारीरिक कार्य गर्न सकिन्छ । साविक भोजन लिनु राम्रो हुन्छ । यस्तो वेला नकरात्मक तथा असफलताको विचारले आक्रमण गर्ने हुँदा सकारात्मक सोचको बानी बसाल्नुपर्छ । हरेक समय उत्साहित हुँदै लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । समस्यामा नअल्झी हरेको सामना गर्दै समाधान खोज्ने बानी बसाल्नुपर्छ । भिज्योलाइजेसन टेक्निक राति निदाउनुभन्दा केही अगाडि तन्द्राको अवस्थामा ‘म स्वस्थ छु, मेरा सम्पूर्ण अंगहरू स्वस्थ छन् ।’जस्ता वाक्य दोहोर्‍याउन सकिन्छ । यस्तै, सकारात्मक वाक्यलाई करिब ५ मिनेटसम्म लगातार दोहोर्‍याउनु राम्रो मानिन्छ । यस्तो वाक्य आफैँ पनि बनाउन सकिन्छ । यसरी दोहोर्‍याउ“दा अवचेतन मस्तिष्कमा छाप बस्छ । फलस्वरूप स्वस्थ बन्न सहयोग पुग्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत्र ०८, २०७३ समय: ११:५५:१२
तनाव कम गर्न आध्यात्मिक अभ्यास
‘रातो मासु’ क्यान्सरको कारक
के–के छन् चिसो पानीमा नुहाउनुका फाइदा
पातलो वीर्यले सन्तान हुन्छ कि हुँदैन ? चिकित्सकले दिए यस्तो उत्तर
प्रेम भएको कति समयपछि यौनसम्पर्क उपयुक्त ? अधिकाशंले यो समयमा सेक्स गरिसक्छन्
नेपालमा पुरुषहरू दिनानुदिन बलात्कृत भइरहेका छन् तर कानुन नभएका कारण घटना दबिरहेको छ
निरन्तर सुपारी खाइरहे हुन सक्छ क्यान्सर, यसरी सकिन्छ यो लत हटाउन र क्यान्सबाट बच्न
डाक्टरको फेरी अर्को ठुलो लापरवाही बाहिरियो : परिवार नियोजन गर्दा महिलाको आन्द्रा काटिएपछि, पेटभरि दिसा बगेर संक्रमण फैलियो
यस्ती भान्जी जसले आफ्नै मामालाई दिइन् कलेजो, कति ठूलो मन
प्रहरीले भन्यो, “११ गोली मनोज पुनलाई लाग्दा समेत उनी उनि उठेर भाग्ने प्रयास गर्दै थिए” त्यसपछि…. (भिडियोसहित)
मिना ढकालको गित पुरा हेर्न सक्नेलाई पुरस्कार, यूटुबम बेग्लै इतिहास बनाउदै(भिडियो सहित)
नागरिकता पाउने विश्वकै पहिलो रोबोट सोफियाले भनिन् ‘प्रविधिको प्रयोगले भ्रष्टाचारमुक्त समाज बन्छ र देशको विकाश छिटो हुन्छ ‘
ओएसनेपाल म्यूजिक अवार्ड २०७५ को दोस्रो संस्करणका लागि आबेदन फारम खुल्ला, यसरी घरबाट नै भर्न सकिन्छ फारम
बुधबार सुन र चाँदी दुबैको मूल्य घट्यो
हट नायिका राधिका आप्टेको फेरी भाइरल बनेको अर्को बोल्ड तस्विर हेर्नुहोस्
असोजभित्रमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा– मन्त्री मगर
प्रहरी मेसमा प्रहरी जबानसँगै गृहमन्त्रीले खाना खानपुगेपछि
मोदीका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब
चन्द्रमामा जग्गा किन्ने पहिलो नेपाली बने काठमाडौं मखनका रमेशकुमार जोशी, कसरी सम्भव भयो यो अनौठो काम ? हेर्नुहोस् अन्तरवार्ता